ဇာဗီ ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲကို လွဲမယ့်သူ ၊ အသင်းကြီးတွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ လက်စတာကြယ်ပွင့် ၊ ဗီလာ မှာ စည်းကမ်းစကိုင်တဲ့ ဂျရတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဇာဗီ ရဲ့ ပထမဆုံးပွဲကို လွဲမယ့်သူ ၊ အသင်းကြီးတွေစိတ်ဝင်စားလာတဲ့ လက်စတာကြယ်ပွင့် ၊ ဗီလာ မှာ စည်းကမ်းစကိုင်တဲ့ ဂျရတ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ တောင်ပံ ကစားသမား အော့စမိန်း ဒမ်ဘီလီ နဲ့ ကွင်းလယ် ကစားသမားလေး ပီဒရီ တို့ဟာ ဒဏ်ရာ ပြဿနာတွေ ကြောင့် နည်းပြသစ် ဇာဗီ စတင် ကိုင်တွယ်မယ့် ပွဲစဉ် ကို ပါဝင် ကစား နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန်မြုးနစ် အသင်းဟာ ဂိုးသမားကြီး မန်နျူရယ် နူအာ ကို စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ် မှာ ကုန်ဆုံးမယ့် စာချုပ်ကို ၂၀၂၅ ခုနှစ် အထိ စာချုပ် ထပ်တိုးဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ၊ ရီးရဲမက်ဒရစ် နဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် တို့ဟာ လက်စတာ စီးတီး အသင်းရဲ့ ခံစစ်မှူး ဝီစလေ ဖိုဖာနာ ကို အပြိုင် စိတ်ဝင်စား နေကြတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ် လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဖိုဖာနာ ဟာ ဒီနှစ် ရွှေဘောလုံးဆု ကို ရီးရဲ တိုက်စစ်မှူးကြီး ဘန်ဇီးမား နဲ့ ဘိုင်ယန် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး တို့ အထဲက တဦးဦး ရရှိ စေလိုတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဝေးလ် လက်ရွေးစင် အသင်း နည်းပြ ရောဘတ် ပေ့ဂျ် ကတော့ လာမယ့် ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲ Play-off ပွဲစဉ်တွေ မှာ အုပ်စု အဆင့်တုန်းက ပြသ ခံထားရတဲ့ အဝါကတ် မှတ်တမ်းတွေ ကို ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ တောင်းဆို ထားတဲ့ စကော့တလန် နည်းပြ စတိဗ် ကလပ် ရဲ့ အဆိုကို ထောက်ခံ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း အီမန်နူရယ် ပီတစ် က ချဲလ်ဆီး အနေနဲ့ ဂျာမန် ခံစစ်မှူး ရူဒီဂါ ကို စာချုပ် သက်တမ်းတိုး ချုပ်ဆို သင့်ကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ပေါလ် ပေါ့ဘာ ဟာ သူ့ရဲ့ ဒဏ်ရာကို ဒူဘိုင်းမှာ သွားရောက် ကုသ နေပြီး အင်္ဂလန် ကို ပြန်လာဖို့ အစီအစဉ် မရှိသေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းရဲ့ နည်းပြသစ် စတီဗင် ဂျရတ် ဟာ အသင်းရဲ့ စားသောက်မှု ပုံစံကို စတင် ကိုင်တွယ်ပြီ ဖြစ်ကာ အဆီတက်လွယ်တဲ့ ဆော့စ်တွေ ကို မစားသုံးဖို့ တားမြစ် လိုက်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
PSG တိုက်စစ်မှူးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ နေမာ နဲ့ မက်ဆီ တို့ဟာ မနေ့က ပြုလုပ် ခဲ့တဲ့ အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း အစီအစဉ် မှာ မပါဝင် ခဲ့ကြဘူးလို့ သိရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် သူတို့ ၂ ယောက်စလုံးမှာ ဒဏ်ရာ ပြဿနာ ရှိမနေ ကြဘဲ တောင်အမေရိက ကနေ ပြန်ရောက် လာစမို့ အနားပေးထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြ ခဲ့ကြပါတယ် ။
နာပိုလီ ခံစစ်မှူး ကာလီဒူ ကူလီဘာလေ က သူ ဟာ ဂျော်ဂျင်ဟို နဲ့ အတူ တွဲဖက် ကစားရတာကို နှစ်သက် တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ချဲလ်ဆီး ကို နာပိုလီ ကနေ ပြောင်းရွှေ့ လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဖီအိုရင်တီးနား နဲ့ အီတလီ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဂီလာဒီနို က ဖီအို တိုက်စစ်မှူး ဒူဆန် ဗလာဟိုဗစ် ဟာ အသင်းကြီးတွေ မှာ ကစားဖို့ လုံလောက်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိနေပြီလို့ ညွှန်းဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
နာပိုလီ ရဲ့ မက္ကဆီကို တိုက်စစ်မှူးလေး ဟာဗေး လိုဇာနို ကတော့ သူဟာ နာပိုလီ မှာ ပျော်ရွှင် နေပြီး အသင်းပြောင်းဖို့ စိတ်ကူး မရှိပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
PSG အသင်းဟာ ဘာစီလိုနာ ရဲ့ အကယ်ဒမီ ကစားသမားလေး ဒီယေဂို အယ်မေးဒါး ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့လည်း သိရှိရ ပါတယ် ။
နယ်သာလန် နဲ့ စပါးတပ် မော်စကို ကွင်းလယ်လူ ကွင်စီ ပရုမ်းစ် ဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ တုန်းက ပါတီ ပွဲမှာ ညီအကို ဝမ်းကွဲ တော်စပ်သူ တဦး ကို ဓါးနဲ့ ထိုးခဲ့မှု အတွက် တရားရုံး ကနေ လူသတ်ဖို့ ကျူးလွန်သူ အဖြစ် စွဲချက်တင် ခံရတော့မယ် လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ရဲ့ ပေါ်တူဂီ လက်ရွေးစင် တိုက်စစ်သမားလေး ဂျာအို ဖိလစ် ဟာ နိုင်ငံ တကာ ပွဲ ကစားရင်း ရရှိ လာခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာကြောင့် ဒီတပတ် ကစားမယ့် လာလီဂါ ပွဲစဉ်ရော ကြားရက်မှာ ကစားမယ့် အေစီမီလန် နဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲကိုပါ လွဲချော် တော့မယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article အသင်းဖော်ဟောင်း နှစ်ဦးရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရတဲ့ ရော်နယ်ဒိုဖက်မှ ကာကွယ်လိုက်တဲ့ ဂျူဗင်တပ် ဂန္တဝင်
Next Article ‘ လိုချင်တဲ့ လစာ ပမာဏကိုသာ ပေးလိုက်ပါ ‘ – စတား တဦးကို မဖြစ်မနေ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ချဲလ်ဆီးထံ တိုက်တွန်းရင်း ၊ ၄င်းကို အာဆင်နယ် ဂန္တဝင် တဦးနဲ့ ခိုင်းနှိုင်းလိုက်တဲ့ ပီတစ်